Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo qabatay Shirka Dib u eegista Mashruuca Farasmada Gacanta (THE BRIDGES). – Ministry of Education in Puntland
By editor	/ May 2, 2018
May/02/ 2018- Wasaaradaha Waxbarashada Somalia, Puntland, Jubaland, Galmudug, Hayadada CARE, Midowga Yurub (EU), Jaamacad Somali National University iyo Xarumaha farsamada gacanta Galkacyo, Kismaayo iyo Muqdisho ayaa isgu yimi kulanka dib loogu eedagyo mashruuca THE BRIDGES.
Kulan oo ay martigalinaysay Wasaarada waxbarshada Puntland waxaa shir gudoominayay wasiir ku xigeenka Wasarada waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland Dr Maxamed Cali Faarax ugu horeyn waxaa Kulankaan ka hadlay agaasimaha Farsamada Gacanta C/casiis Nuur ee Wasaaradda Waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya isagoo sheegay in barnaamijkan yahay mid ka fulay guud ahaan dowlad goboleedyada dalka oo dhan. Waxaa sidoo kale munaabada ka hadlay masuuliyiin ka socday Wasaardaha Waxbarshada Galmudug iyo Jubaland.
Elex oo matalaysay Midowga Yurub (EU) ayaa shirka ugasoo qayb gashay Video conference ahaan ayaa soo dhaweysay guulaha uu mashruucan gaaray 6dii bilood ee lasoo dhaafay iyo ada shaqaynta kala dhaxaysa Wasaraada Waxbarashada maamul Goboleedada.
Wasiir klu xigeen Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare Puntland Dr. Mohamed Ali faraax oo shirka furay ayaa soo dhaweeyay martida ka timi goblada ugana mahadceliyay kasoo qaybg galka shirka, wasiirku wuu ka hadlay muhiimada uu mashruucaan uleeyahay guud ahaan Somalia Gaar ahaan Puntland.
Mashruuca THE BRIDGES oo ay maalgelinayaan Midowga Yurub iyo hay’adda Care International ayaa ah mid lagu horumarinayo farsamooyinka gacanta gaar ahaan farsamooyinka la xiriira Dhismaha Jidadka iyo Ka faaiddaysiga Tamarta dabiiciga ah.
Mashruucan oo soo bilowday 2016kii waxaa ujeedkiisu yahaya in 500 dhalinyaro soomliyeed lagu tababaro dhismaha jidadka iyo ka Soolarka ayaa soconaya mudo 3 sano.
Masuuliyiinta kasoo qayb galay shirka ayaa isla jeexjeexaya wax yaabihii qabsomay 6dii bilood ee lasoo dhaafay iyo qorshayaasha 6da bilood ee soo socota iyo hadi ay jiraan wax caqabado ah oo soo wajahay mashruuca, waxay sidoo kale warbixino ka dhagaysan doonaan masuuliyiinta xarumaha farsamada gacanta somaaliya heerku uu umarayo tababarka.
shirkaan ayaa horay uga dhacay sanadkii hore Maamul Goboleedka Jubaland Xaruntiisa Magalada Kismaayo ayaa aha wajigii labaad oo lagu qabato Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare ee dowlada Puntland.